Qelasy, waa kaniiniga waxbarasho ee laga sameeyay Ivory Coast - Afrikhepri Fondation
Qelasy, kaniiniga waxbarasho ee lagu sameeyay Ivory Coast
Qelasy macnaheedu waa "fasalka" oo ku qoran luuqadda Akan. Kiniinka waxaa loogu talagalay bulshada waxbarashada. Waa kiniin waxbarasho kaas oo bixin doona barnaamijyo iyo qalab loogu talagalay ardayda. Buugaagta khaaska ah ee dugsiyada ee waddan kasta oo kiniinka la heli karo. Kiniinadu waxay kaloo yeelan doonaan layliyo maalin kasta ah kormeerka koorsada iyo qiimeynta ardayga. Tani waxay u oggolaaneysaa in ay u isticmaasho fasalada fasallada, ardayda iyo waalidka.
Sida naqshadeynta Qelasy, Thierry N'Douffou, kaniiniga ma beddeli doono macallimiinta, laakiin wuxuu noqon doonaa taageero koorso dhexdhexaad ah. ah kiniin waxbarasho Sidaa darteed Qelasy wuxuu waalidiinta u oggolaan doonaa inay raacaan darajooyinka carruurtooda. Waxay sidoo kale u adeegi doontaa sidii buug xusuus qor ah iyo kaarka warbixinta.
Tilmaamaha farsamada ee kiniiniga Qelasy waa sida soo socota
- Nidaamyada hawlgalka: Android 4.2 - Shaashad: 8 inji - Processor: Bawdada-xuddunta 1 Ghz - Xusuusta gudaha: 16 GB - Miisaanka: 480 garaam - Madax-bannaanida: 8 saacadood - Qiimaha bilowga: 270 euro ama 180 000 Fcfa
Kiniin waxbarasho Qelasy waxay u adkeysan doontaa biyaha iyo boodhka. Kuwa yaryar waxay awood u yeelan doonaan inay kaniinigooda ku haystaan ​​meel kasta iyo xaalad kasta.
Kiniinka Qelasy waxaa lagu heli doonaa saddex nuqul: - "Kid" oo loogu talagalay carruurta yaryar ee leh lambarka waalidnimo - "Dhallinyar" loogu talagalay dhalinyarada - "Uni" ee ardayda
Wareeg kasta oo ka mid ah kiniinada waxbarasho waxay yeelan doonaan software gaar ah. Intaa waxaa dheer, suurtogalnimada helitaanka shaqo dheeraad ah ayaa la oggol yahay, iyo sidoo kale Qelasy waxay yeelan doontaa dukaanka dalabka ee gaarka ah.
Qaar ka mid ah sifooyinka waxay sameeyaan Qelasy, kiniin gaar ah. Kuwani waa kuwa kale
• Qelasy boorsada dugsiga content dematerialized jidaynayey ardayga fasalka la shuqulladiisa oo dhan, buugaagta uu, iyo khayraadka kale ee waxbarasho u socoto oo aan haysan si ay u fuliyaan boorsooyinka kg 15 balse in ka yar 500 g.
• Qelasyada, waalidiinta iyo macalimiintu way xakameynayaan. Waxay go'aaminayaan araajinta araajida ardaygu u heli karo, wakhtiyada uu ardeygu isticmaali karo Qelasyada iyo haddii uu u ogolaan lahaa ama u ogolaan karo inuu galo internetka iyo boggaga internetka. Waalidka Qelasyadu waxay raaci karaan qoraallada ardayga waqti kasta oo ka socda kumbiyuutarka ama Qalabka Qelasiga oo ay la macaamilaan macalimiinta.
• Iskuulada iyo macallimiintu waxay leeyihiin habka daabacaadda wax-barashada wax-barashada iyo is-dhaafsiga is-dhaafsiga waalidka.
• Qelasyadu waa biyo la'aan, u adkaysata cimilada xun iyo boodhka, waalidiinta ayaa loo xaqiijin karaa, xitaa haddii ay dhacdo roob, buugta buugaagta iyo buugta buugta lagu xafido. In case of matantaha culus oo kiniin ah, waxaa la nadiifin karin ama biyo la'aan khatar kasta, oo ka badan Qelasy leeyahay nolosha wanaagsan batari in ay u ogolaadaan isticmaalka xoogan inta lagu jiro maalintii oo aan halista eynu.
• Qelasyadu waa amaan, helitaanka ayaa ku xiran aqoonsi qasab ah. Kaliya Qelasy ayaa loo isticmaali karaa qofka loo ogolaaday. Intaa waxaa dheer, Qelasy wuxuu u baahan yahay dhaqdhaqaaqa hore ee qalabka si uu si keli ah ugu qoro kiniin arday.
• Qelasyadu waa qalab iskuul, ma aha kiniini la ciyaaro. Waxay u ogolaaneysaa helitaanka buugaag iyo buugaagta digital-ka ah, oo lagu kobciyo miidhiyaha multimedia iyo mawduucyo dhexdhexaad ah, waxay leedahay dukaanka dalabka iyo buugaagta oo kaliya oo bixiya buugaag, codsiyo iyo ciyaaraha waxbarasho
• Qelasyadu waa kiniin ku xiran, waxay u oggolaaneysaa 3G in ay internetka helaan. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad wacdo oo aad dirto fariimaha qoraalka ah, oo dhan oo hoos imaanaya kormeerka xakameynta dugsiga ama waalidka. Sidaa daraadeed, waxay u ogolaaneysaa dadka ka shaqeeya in ay bixiyaan xirmo waxbarasho oo isku dhafan codka, iyo xogta helitaanka waxbarasho oo leh dhaqdhaqaaq dhamaystiran.
• Qelasy ma aha oo kaliya kaniiniga laakiin waa xal isku dhafan oo bixiya iskuulada iyo machadyada madal loogu talagalay maaraynta iskuulka, maaraynta xiriirka waalidka iyo macalinka iyo maareynta terminal. Dugsiyada dhexdeeda, waxay ku tiirsan tahay shabakad maxalli ah si loogu riixo nuxurka kiniinnada. Waxay ku tiirsan tahay internetka wadahadalka ay la leedahay waalidiinta
• Qelasy ayaa sidoo kale ah bogga loogu talagalay la-hawlgalayaasheeda ama shirkadda wax soo saarka ee daabacan.
category BARNAAMIJYADA CIIDAMADA IYO GARGAARKA
Maqaallo kale oo ku jira qaybta
Qoraalka Mandombe, qoraal Negro-Afrikaan ah
Tansaaniya waxay ku guuleysatay abaalmarinta hal-abuurka iyada oo la adeegsanayo nidaamka sifeynta biyaha
Ku shub maqaallo dheeri ah
Injiilka qarsoodiga ah ee Barnabas, Kitaabka Quduuska ah ma qaldan yahay - Documentary (2015)
Xuquuqda daabacaadda © 2021 Afrikhepri
Haddii aad jeceshahay bogga, fadlan la wadaag asxaabtaada ama qoyskaaga!